Guangzhou Comax Telecommunication Fiber Cable CO., LTD is a high-tech company group engaged in researching, kugadzira, kutengesa zvigadzirwa zvekutaurirana nekwanisiro edu ekunze nekutengesa kunze kwenyika. Kambani yedu inyanzvi yekugadzira fiber optic tambo uye chigamba cheketani pamusoro pe6years, ne ISO, Ul, CPR, ROSH, REach neEC zvitupa.
Isu OEM kana kugadzira chero chimiro che fiber optic tambo ye iwe.Zvigadzirwa zvikuru zvekambani yedu zviri: waya yemahara fiber uye eparintern fiber zvinongoitika. Zvese zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya mu telecom, magetsi poda, njanji nezvimwe zvigadzirwa zvekutaurirana zvine chekuita, kutumirwa kune dzimwe nyika dzakawanda nematunhu akadai seAmerica, Europe, Moutast neSoutheast Asia.
Guangzhou Comax Telecommunication Fiber Cable CO., LTD is a high-tech company group engaged in researching, kugadzira, kutengesa zvigadzirwa zvekutaurirana nekwanisiro edu ekunze nekutengesa kunze kwenyika.
Quick Links HERE CO CHINANGWA CASES Vhidhiyo IZVI NYAYA KUSVIKANA
Products Kunze kweFibre Optic Cable
Guangzhou Comax Telecommunication Fiber Cable CO., LTD. © 2020 ZVESE ZVESE ZVAKAITWA